Xildhibaan Cadirashiid Xidig ayaa sheegay in amaanka Jubaland yahay mid ku kooban 8KM – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xiddig, oo ka mid ah Xildhibaanadda Golaha Shacab ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee u taagan qabashada Xilka Madaxweyha Maamulka Jubaland ayaa sheegay in maamulka Jubaland looga baahnaa in ay xaqiiyaan amaanka guud ahaan degaanadda hoostaga Jubaland balse hada ku kooban yahay oo kaliya 8KM oo kaliya.
“Waxaad u jeedaan in amaanka Jubaland uu ku kooban yahay 8 KM oo Kismaayo dhexdeeda ah” ayuu ku yiri Xildhibaan Cabdirhiid Maxamed Xidig oo la hadlayay mid ka mid ah waxgarada beelaha dega Jubooyinka.
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, ayaa sheegay in sida ay amaanka u haystaan dadka ku nool degmada Kismaayo si lamid ah ay nolal iyo amni u rabaan shacabka ku nool degmooyinka Jilib, Xagar, Bu’aale iyo Jamaame, oo dhamaanba hoos yimaada Maamulka Jubaland balse ay maamulaan Al-shabaab.
Xildhibaan Cabdirashiid xidig oo soo hadal qaaday joogitaankiisa magaaladda Kismaayo asaga iyo musharaxiin badan ayaa waxa uu ku sheegay mid ku dhisan nabad iyo qabashada xilka Madaxweynaha Jubbaland ee tartanka loo galayo dhamaadka sanadkaan 2019.
“Waxaan rabaa in aan idiin sheego in aysan jirin wararka sheegaya in lagu soo duulay Jubaland si loo dumiyo maamulkaan” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirashiid Xidig.
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, ayaa mar uu ka hadlayay arimaha Jubaland waxa uu sheegay in aysan jirin cid albaabada xiran karta, ama diidi karta in loo tartamo xilka ugu sareeya Maamulka Jubaland
“Majirto cid albaabada xiran karta ama diidi karta in laga hadlo waxa ka jira Jubaland, in la tartamo” ayuu yiri Xildhibaan Xidig asagoo u jawaabayay hadalo ka soo baxay hey’adaha amaanka Jubbaland.